घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू स्पेनिश फुटबल खेलाडीहरू डानि ओल्मो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो डानि ओल्मो बायोग्राफीले तपाईंलाई उसको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी, कारहरू, नेट वर्थ, जीवनशैली र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा तथ्यहरू बताउँदछ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो स्पेनिश पेशेवर फुटबलरको जीवनकाल हो, उहाँ बाल्यकालदेखि, जबसम्म उहाँ प्रसिद्ध हुनुभयो। तपाईंको आत्मकथा भूख बढाउन यहाँ वयस्क ग्यालेरीमा उनको बाल्यकाल छ - डानि ओल्मोको बायोको एक सारांश।
डानि ओल्मोको जीवन र उदय।
हो, सबैलाई थाहा छ कि ऊ खेलको शानदार दर्शनको साथ एक द्रुत dribbler हो। जे होस्, केहि थोरैले दानी ओल्मोको जीवनीको हाम्रो संस्करणलाई विचार गर्छन् जुन अत्यन्त चाखलाग्दो छ। अब, थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
डानि ओल्मो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक पृष्ठभूमि र प्रारम्भिक जीवन
जीवनी सुरु गर्नेहरूको लागि, उहाँ उपनाम लिनुहुन्छ "ओल्मिक“। डानियल "डानी" ओल्मो कारभाजल स्पेनको टेरासा शहरमा मे १71998 of को सातौं दिनमा जन्म भएको थियो। उहाँ आफ्नो सानो परिचित आमा र उनका बुबा - मिकेल ओल्मो फोर्ट (एक पूर्व पेशेवर फुटबलर प्रशिक्षक बने) मा जन्मनुभएको थियो। यहाँ डानि ओल्मोका आमा बुबा मध्ये एक हुनुहुन्छ (उसको बुवा) जो यस लेखमा राम्रोसँग दस्तावेज गरिएको छ।
डानि ओल्मोको बुबा मिकेल ओल्मो फोर्ट।
स्पेनिश र क्रोएसियाई परिवारको उत्पत्तिसँग मिल्ने जातीको स्पेनिश नागरिक उसको टेरेसामा रहेको जन्म शहरमा हुर्केका थिए जहाँ उनी हुर्किए र उनका ठूला भाइ कार्लोसका रूपमा चिनिन थाले।
टेरासामा एक मध्यम-वर्ग पारिवारिक पृष्ठभूमि सेटि .मा हुर्केका, बेबी ओल्मो रमाइलो-मायालु बच्चा थिए जसले आफ्ना भाईलाई बुबासँग फुटबल खेल्ने रमाइलो हेरेका थिए। ऊ चाँडै कसरी हिड्ने सिकेर परिवारको खेलकुदको आभासको पार्टनर भयो, जबकि उसका बुवा र भाईले उसलाई फुटबलमा उच्च स्तरको मजाका लागि निर्देशित गरे।
डानि ओल्मो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
ओल्मो अझै सानै थिए जब उनको बुवाले उसलाई स्थानीय फुटबल क्लब टेरासा एफसीमा तालिमको लागि दर्ता गरे। यद्यपि त्यो सानो बच्चा क्लबको "बेन्जामिन" टीमको सदस्य बन्न दुई वर्ष कान्छो भए, यद्यपि उनी धेरै कारणहरूले गर्दा भर्ना भए।
युवा ओल्मोले न्यूनतम आवश्यक उमेरमा अभाव भए पनि टेरासा एफसीमा स्थान खोज्यो।
सुरुमा, ओल्मोका बुबा मिकेल त्यतिबेला टेरासाका प्रशिक्षक थिए। सबै भन्दा माथि, फुटबल उडन्ता पर्याप्त उमेरको जीवन भावनात्मक र रणनीतिक बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गर्दछ जुन उमेर संख्यामा उनको अभावको लागि बनेको थियो।
डानि ओल्मो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
टेरासा एफसीको मैदान युवा ओल्मोका लागि प्रशिक्षण सतहहरू भन्दा बढी थियो। वास्तवमा ती युवाका लागि प्रदर्शनी प्लेटफर्महरू थिए जसको बलमा आक्रामक क्षमता आरसीडी एस्पानिओल लगायतका छिमेकी क्लबहरूमा चासो थियो। उनको छोरा बार्सिलोना स्थित क्लब संग परीक्षण पारित गरेको समयमा विशेष गरी उनको बुबाले डानि ओल्मोका आमा बुबाको आनन्दको कुनै सीमा थिएन।
जब समय सहि थियो, 8 बर्षे ओल्मो फुटबलमा व्यस्त क्यारियर सुरु गर्न २०० 2006 मा आरसीडी एस्पानिओलमा सामेल भए। "अर्नेस्ट" किनभने उसले आफ्नो कम्फर्ट क्षेत्रबाट टाढा धेरै प्रतिस्पर्धी फुटबल खेल्न सुरु गर्यो।
उनी आरसीडी एस्पानियोलमा सामेल भए पछि डेनि ओल्मोको बाल्यावस्थाको फोटो।
डानि ओल्मो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सडकमा फेम स्टोरी
यो याद गर्नु उपयुक्त छ कि ओल्मो आरसीडी एस्पानिओलमा कुरूप हाँस्ने व्यक्ति थिएनन, न त उनी २००-मा बार्सिलोना एकेडेमीमा9बर्षको उमेर पुगेकोमा समृद्ध थिएनन्। वास्तवमा उनले लाबाट द्रुत र प्रभावशाली वृद्धि रेकर्ड गरेका थिए। मासिया क्लबको युवा पक्षको साथ आफ्नो छ-सत्रमा चार मा शीर्ष स्कोररको रूपमा समाप्त गर्दै।
एक युवा खेलाडी मात्र हैन: डानि ओल्मो बार्सिलोनाको एकेडेमीमा उनको बढ्दो अंशको लागि एक स्टारलेट थिए।
चीजहरू त्यतिखेर किशोर-किशोरीका लागि दक्षिणतिर जान थाले जब दुई कोरियाली खेलाडीहरू आए। नयाँ बच्चाहरू - Kyeol-heui जंग र ली Seung-वू - एक वि win्गर र क्रमशः अगाडि केन्द्र, ठूलो प्रतिष्ठाका साथसाथै कडा मिडियाको उपस्थिति थियो। नतिजाको रूपमा, ओल्मो अन्डर १ 16 टीममा हावामा हालेको थियो। विकासले ओल्मोलाई बडो बडो अचम्मको चालमा दीनमो जग्रेबमा सामेल गरायो किनभने उसले बार्सिलोनाको अन्धकार भविष्य अनुभव गरेको थियो।
डानि ओल्मो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
दीनामो जाग्रेब ओल्मोको लागि साहसी नयाँ संसार थियो जसले आफ्नो पहिलो टीम फेब्रुअरी २०१ 2015 मा क्रोएसियाली टीमको साथ शुरू गरे र क्लबमा एक विश्वसनीय गोल स्कोरर बन्न अघि बढे। उनी २०१ 2018 को लागि क्रोएसियाली पहिलो फुटबल लीगको सर्वश्रेष्ठ खेलाडी पनि थिए र उनी टुटोस्पोर्टको 'गोल्डेन ब्वा' अवार्डमा ११ औं स्थानमा पुगे। जोसिप ब्रेकालो र किलियन एमपीएपी.
डानि ओल्मोले २०१ for को लागि क्रोएसियाली पहिलो फुटबल लीगको सर्वश्रेष्ठ खेलाडी जित्यो।
लेखनको समय अगाडि छिटो, ओल्मोले प्राप्त गरेको जस्तै एक meteoric वृद्धि हासिल गरेको छ गेब्रियल बार्बोसा, अल्फ्रेडो मोरेलोस, मूससेट लिली र रोड्रिगो गयो। उहाँ एक स्थापित विger्गर / एट्याकिंग मिडफिल्डर हुनुहुन्छ जसले अ sides्ग्रेजी पक्ष चेल्सी र म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट ओभरटाइम रुचि राख्दछन्। उनको पनि बार्सिलोनाले खोजी गरिरहेको छ जो आफ्नो एक समयको स्टारलेटमा हस्ताक्षर गर्ने विश्वासमा छन् जुन क्रोएशियामा आफ्नो नामको लागि भाग्यो। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
डानि ओल्मो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्धी जीवन तथ्यहरू
डानि ओल्मोको प्रेम जीवनमा अग्रसर हुँदै, त्यहाँ फुटबॉल प्रतिभाको प्रेमिका छ कि छैन भन्ने बारे कयासहरू लगाइएको छ। अनुमानहरू निरन्तर यो तथ्यले उकास्दै जाँदैछन् कि ओल्मोले कुनै संकेत छोड्दैन जुन उसले अविवाहित छ वा छैन भन्ने सुझाव दिन्छ। जबकि धेरैको धारणामा यो हुन सक्छ कि आक्रमणकारी मिडफिल्डरको एक गोप्य प्रेमिका छ, अरूले विश्वास गर्छन् कि उनी साँच्चिकै अविवाहित छन् र आफ्नो क्यारियरमा केन्द्रित छन्।
यो जीवनी लेख्दा डानि ओल्मो एक्लो हुन सक्छिन्।
जे होस्, त्यहाँ बार्सिलोनाबाट आश्चर्यजनक रुपमा बाहिर निस्के जस्तो आश्चर्यलाग्दो तर्कको लागि आफ्नो विद्वानता दिएर विन्जर चाँडै नै सुन्दर पत्नीसँग विवाह भएको भनेर चिनिन सकिने तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिदैन। भविष्यमा जुनसुकै पनि सम्बन्धको स्थिति उसको लागि झुकाव हुन्छ, हामी आधिकारिक रूपमा भन्न सक्छौं कि उनको कुनै छोरा (हरू) वा छोरी (हरू) विवाहको बखत लिखित समयमा छ।
डानि ओल्मो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन तथ्य
जब कोही आफ्नो आशीर्वाद गणना गर्दछ, डानि ओल्मोको परिवार विशेष गरी उसको आमा बुबा एक भन्दा बढि गणना गरिन्छ। फुटबलरले आफ्नो परिवार बिना राम्रो जीवन बिताउन कहिल्यै कल्पना गर्न सक्दैन। यस सेक्सनमा हामी तपाईलाई डानि ओल्मोको परिवारका सदस्यहरूको बारेमा आफ्ना आमा बुबाआमाबाट जानकारी गराउँदछौं।
डानि ओल्मोको बुबाको बारेमा: मिकेल ओल्मो फोर्ट वि the्गरको बुबा हो। उहाँ जनवरी १ 20 1966 को २० औं दिनमा जन्मनुभएको थियो र स्पेनिस तल्लो लिग टोलीहरूको लागि व्यावसायिक फुटबल खेल्नुभयो। दुई जनाका बुबा १ 1998 his in मा बुट झुण्ड्याएदेखि नै टिमको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। ओल्मोसँग उहाँ नजिकको बुबा-छोराको सम्बन्ध साझेदारी गर्नुहुन्छ र विन्जरले आफ्नो भविष्यको बारेमा बनाउने महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा संलग्न भएको छ।
डानि ओल्मो आफ्नो बुबा मिकेल संग।
डानि ओल्मोकी आमाको बारेमा: ओल्मोकी आमाको बारेमा अरु धेरै ज्ञात छैन किनकि उनी क्रोएसियाली परिवारको परिवारका हुन् र ओल्मोलाई हुर्काउन सहयोग गर्छिन्। हो फुटबल प्रतिभाले विरलै उनको बारेमा कुरा गर्छ, न त उनी अन्तर्वार्ताको दौरान आफ्नो बुवाको बारेमा गीत गाउछन्। त्यस्ता स्वभावहरू मात्र उसको पेसागत प्रकृतिलाई पुष्टि गर्न मद्दत गर्दछ जुन एक फरक बल खेल हो जुन उसको व्यक्तिगत र निजी जीवन हो।
डानि ओल्मोका भाइबहिनीहरूको बारेमा: ओल्मोलाई एउटा ठूलो भाइ कार्लोस भनेर चिनिन्थ्यो। ओल्मोले जस्तै कार्लोसले आफ्नो क्यारियरको निर्माण टेरासा एफसीबाट शुरू गरे र एक पेशेवर फुटबलर बन्न गए जसले लेखनको समयमा - दीनामो झग्रेब दोस्रोका लागि एक डिफेन्डरको रूपमा आफ्नो व्यापार चलाउँछ।
डानि ओल्मो आफ्नो ठूलो भाइ कार्लोस संग।
डानि ओल्मोका आफन्तहरूको बारेमा: दानी ओल्मोको नजिकको पारिवारिक जीवनबाट धेरै टाढा जानेको छैन जुन उनको पुर्खाको बारेमा छ खास गरी उसको बुवा हजुरआमा। उनको बुवा हजुरआमालाई मिलाग्रोस फोर्टे भनेर चिनाइएको छ जबकि उहाँ आफ्ना बुवा हजुरबुबाको बारेमा धेरै जान्नुहुन्न। त्यस्तै गरी, खेलाडी काका, काकी र काका-काका-काका-काका र काकाका भतिजाहरू र भतिजाहरू लेख्नको लागि अझै चिनिन सकेका छैनन्।
डानि ओल्मो उहाँकी आमाको हजुरआमा मिलाग्रोस फोर्टसँग।
डानि ओल्मो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन तथ्य
ओल्मोको व्यक्तित्व वृष राशिको विशेषताहरू बनाउने जस्ता संवेदनशीलता, स्पट-अन अन्तर्ज्ञान, नम्रता र स्थिरता समावेश गर्दछ। विशेषताहरू योगफल उसलाई विन्गर एक शान्त व्यक्तित्व दिन जो उसलाई मित्रहरू र फ्यानहरूमा प्रेम गर्दछ।
कसरी विger्गरले २ 24 घण्टाको आफ्नो सेयरबाट अधिकतम बनाउँदछ भन्ने सम्बन्धमा, उसले केहि गतिविधिहरू संलग्न गर्दछ जुन उसको चासो र रुचिलाई मानिन्छ। तिनीहरू यात्रा, टेनिस खेल, संगीत सुन्न र साथीहरु र परिवार संग गुणवत्ता समय खर्च समावेश छ।
फुटबलबाट टाढा, टेनिस खेल्नु डानियल ओल्मोको उमेर-लामो आवेग हो। यो एक महाकाव्य थ्रोब्याक फोटो हो जुन उनलाई आफ्नो बुबासँग एक रमाईलो टेनिस खेल पछि प्राप्त गर्दछ।
डानि ओल्मो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - जीवन शैली तथ्य
के तपाईंलाई थाहा छ डानि ओल्मोको बढ्दो बजार मूल्य € 35.00 मिलियन हो? यद्यपि यो बायो लेख्ने क्रममा उसको कुल सम्पत्ति समीक्षा अन्तर्गत छ। शीर्ष उडान फुटबलमा केहि वर्षको अनुभव भएकोमा धन्यवाद छैन।
त्यसकारण, उसले न लेख्ने समयमा ठूलो खर्च गर्छ न त विदेशी कार र महँगो घर भएका उपलब्धि खेलाडीहरूको विलासी जीवनशैली बिताउँछ। जहाँसम्म, ओल्मोलाई राम्ररी पार्टी गर्ने र विश्व रिसोर्टहरू र पार्कहरूमा छुट्टिहरू कसरी खर्च गर्ने भनेर थाहा छ।
राम्रो जीवनको संकेत: त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छैनन् जो रिसोर्ट्समा द्रुत डु boat्गामा सवारी गर्न सक्छन्।
नम्र जीवनशैली बिताउनको लागि कुञ्जी डानि ओल्मोका अभिभावकलाई श्रेय दिइन्छ जसले उसलाई दिनदिनै संघर्ष गरिरहेका हुन्छन्।
डानि ओल्मो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
डानि ओल्मोको बाल्यावस्थाको कहानी र जीवनी सबैभन्दा राम्रो रूपमा उहाँ बारे मा कम कम वा कम ज्ञात तथ्य संग लपेटो।
धर्म: ओल्मो धर्ममा ठूलो छैन जबकि त्यहाँ लेखनको क्रममा उनको विश्वासलाई दर्साउने कुनै संकेतकहरू छैनन्। सायद यो तथ्यको कारणले हुन सक्छ कि डानि ओल्मोका आमा-बुबाले आफ्ना छोरालाई हुर्काएनन्, जसले उसलाई एक विशिष्ट धार्मिक शिक्षाको पालना गर्‍यो। यसैले, यो ओमलो एक विश्वासी हो कि होइन भनेर निर्णायक रूपमा भन्न सकिदैन।
ट्याटूहरू: शारीरिक कला वा ट्याटूहरू लेख्दाको समयमा ओल्मो चिन्ताहरूमध्ये कम हुन्। १.1.79 m मिटरको उचाई हुने आक्रमण गर्ने विger्गर नियमित व्यायामको माध्यमबाट आफ्नो शरीरलाई सुधार गर्नेमा केन्द्रित छ। वास्तवमा उसले फेन्सी पेशी निर्माण गर्दछ र कूक माचोलाई मनपर्दछ।
डानि ओल्मो अनाकलनीय समयदेखि टाटु बिना नै हुनुहुन्छ। यो बायो लेख्ने समयमा केस कुनै फरक छैन। ]
धुम्रपान र मदिरा: धेरै नम्र फुटबलरहरू जस्तै: ईमि बुवेन्डा र तारिक लेम्प्टेइ आदि, ओल्मो लेखेको समयमा धुम्रपान वा पिउने कुराको रूपमा थाहा छैन। त्यस्ता जीवनशैलीका कारणहरू किन भन्ने हो कि फुटबल प्रतिभाले स्वस्थ जीवनशैली बिताउँदा प्राप्त हुने फाइदाहरूलाई बिर्सेको छैन।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो डानि ओल्मो चाइल्डहुड स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।